Dukaamada ugu fiican ee lagu iibsado mobilada si badbaado leh iyo qiimo wanaagsan | War gadget
Dukaamada moobiilka ugu fiican
Qolka Ignatius | | La cusboonaysiiyay 14/09/2021 12:50 | Mobiles
Taleefanka gacanta ayaa noqday sanadkii la soo dhaafay, qalabka ay adeegsadayaasha adeegsadaan si ay ugu xirmaan internetka, inaad la tashato bog, emayl u dir, arag shabakadaheena bulshada ... markaa iibka PC-gu wuxuu sii wadaa inuu hoos u dhaco sanadba sanadka ka dambeeya isagoon muujin calaamado soo kabasho.
Maaddaama taleefannada casriga ahi ay yihiin aaladda ugu isticmaalka badan ee lagu xiro internetka, waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan ku raaxeysano qalabka ugu fiican qiime jaban. Labadii sano ee la soo dhaafay, tiro badan oo ka mid ah shabakadaha Aasiya ayaa ka degay Spain waxayna noo ogolaadeen inaan iibsano mobilada Aasiya oo leh qiimo jaban, laakiin marna ma sahlana in la ogaado kuwa ugu fiican. Si aan shaki kaaga saarno, hoosta waxaan ku tusaynaa waxa ay yihiin dukaamada internetka ugu fiican ee lagu iibsado mobilada.
1 Tayo soo saarayaasha taleefannada casriga ee Aasiya
3 Hababka lacag bixinta
4 Dukaamada ugu fiican ee internetka si aad u iibsato taleefannada gacanta ee jaban
4.1 Iftiin sanduuqa
4.2 TOM TOP
4.8 Arbacada ah
4.9 Qaybaha PCc
Tayo soo saarayaasha taleefannada casriga ee Aasiya
Sumadaha Shiinaha sida Xiaomi, OnePlus, Meizu, Oppo, Vivo, Doogee, ZTE... waxay noqdeen xulashooyinka ugufiican ee hada lagaheli karo suuqa, waxay na siinayaan aalado leh qiime aad u wanaagsan oo tayo leh xaaladaha badankood. In kasta oo aan sidoo kale heli karno shirkado ay ka mid yihiin Leagoo ama Elephone, kuwaas oo kolba in yar oo ka mid ahi ay noqonayaan wax ka beddelaad badan kan Aasiyaanka waaweyn ee aan kor ku soo xusnay.
Marka laga reebo Xiaomi, yaa ka furtay dukaan jireed iyo mid internetka ah dalka Spain sanadkii horeIn kasta oo buuggeedu weli aad u yar yahay, haddii aan dooneyno inaan ka iibsanno boosteejooyin noocyadan, waxaan ku qasbanaaneynaa inaan booqano degellada internetka, inta badan kuwa Aasiya, haddii aan dooneyno inaan helno qiimaha ugu wanaagsan ee suurtagalka ah iyo haddii aan samir ku filan aan sugno waqtiga rarka, waqtiga rarka oo mararka qaar aad u dheer.
Waa inaan sidoo kale tixgalino suurtagalnimada khidmadaha kastamka, maadaama mararka qaarkood, waxay u egtahay in qiimaha ugu dambeeya ee aan ku bixinay terminal, lagu dari doono inta udhaxeysa 30 iyo 50 euro kadib marka aan soo marno kastamka. Nasiib wanaagse, websaydhada badankood waxay nagu wargeliyaan dhinacyadan, markaa ka hor intaanan iibsan waxaan iibsan karnaa qiimaha ugu dambeeya ee sicirka, haddii ay jiraan kuwo leh bogag kale ama si toos ah Spain.
Dammaanad-qaadku badanaa waa mid kale oo ka mid ah cabsida ay adeegsadayaal badani la kulmaan, tan iyo mararka qaarkood, Adeeggu wuxuu noqon karaa oo keliya Shiinaha, taas oo nagu qasbi karta inaan dib u dirno taleefanka oo aan sugno dhowr bilood illaa inta dib loogu soo celinayo annaga oo la dayactiray. Xiaomi waxay ku leedahay adeeg farsamo rasmi ah dalka Spain, halka Leagoo iyo OnePlus, si aan u soo qaadno tusaalayaal kooban, waxay leeyihiin adeeg farsamo oo u gaar ah Yurub, sidaa darteed waqtiga aan noqon karno taleefan la'aan si aad ah ayaa loo dhimayaa iyada oo aan wax dhibaato ah laga qabin terminaalkeena.
Cabsi kale oo inbadan oo isticmaaleyaashu la kulmaan markay ka iibsanayaan mobilada raqiiska ah internetka ayaa la helayaa markay tahay ku bixi khadka tooska ah. Inta badan websaydhada aan kugu muujiyo maqaalkan, waxay na siinayaan ikhtiyaarka bixinta ee PayPal, habka ugu fiican ee lacag bixinta haddii aan dooneyno inaan xasilloonno marwalba, tan iyo haddii ay dhacdo wax dhibaato ah oo ku saabsan sheyga ama rarka, waa waxay noqon doontaa PayPal kuwa taxaddar si ay u xalliyaan ama, haddii ay taasi dhacdo, soo celin lacagta.
Dukaamada ugu fiican ee internetka si aad u iibsato taleefannada gacanta ee jaban
Ragga ka socda Iftiinka sanduuqa waxay si joogto ah noo siiyaan dalabyo gaar ah Kuwaas waxaa ka mid ah had iyo jeer terminal Xiaomi, labadaba moodooyinka ugu dambeeyay, iyo kuwa suuqa ku jiray in muddo ah laakiin maanta waxay si buuxda ugu habboon yihiin nolol maalmeedka dadka isticmaala badankood.
TOM TOP wuxuu noqday a in ka badan beddelaad ansax ah Aliexpress oo weyn, sida Iftiinka sanduuqa, mahadnaqa dallacaadaha joogtada ah kuma eka taleefannada casriga ah noocyada Shiinaha, laakiin sidoo kale wax soo saar elektaroonig ah. Dabcan, waa in aan lagu jirrabin dhammaan dalabyada ay na siiso, gaar ahaan alaabooyinka u muuqda kuwo la yaab leh ka dibna ka tagaya waxyaabo badan oo la doonayo, illaa aynaan run ahaantii ogeyn waxa aan iibsaneyno.
Aliexpress waxay ahayd hal saac degelladii ugu horreeyay ee Aasiya lagu soo bandhigo Spain taasina waxay noo oggolaanaysaa inaan ka iibsanno taleefannada gacanta noocyada Aasiya qiimo aad u macquul ah. Celceliska waqtiga maraakiibta badanaa waa hal bil mararka qaarkoodna, markaan soo marno caadooyinka waxaan la kulannaa wax aan fiicnayn markii keenista wareejinta, DHL kiisaska badankood, waxay nooga digayaan inay tahay inaan diyaarino dheeri si aan awood ugu yeelano inaan xirmada la qabanno waxaa ku jira nooca casriga ah ee casriga ah. Haddii aad raadineyso terminal Xiaomi qiimo wanaagsan, Aliexpress ayaa ugu dhow ikhtiyaarka ugu fiican, in kasta oo had iyo jeer ay tahay inaan isbarbar dhigno qiimayaasha websaydhada kale, haddii aan helno dalab gaar ah.
Banggood wuxuu naga dhigayaa qashinkeena tiro badan oo dalabyo ah, ficil ahaan maalin kasta taleefanka, markaa haddii nalagu qasbo inaan si deg deg ah u cusbooneysiino taleefankeena casriga ah adigoon sugin wax dalab ah, waqtiga xamuulkuna ugu yar yahay, degelkan wuxuu noqon karaa midka aan raadineyno.
Mid kale oo waawayn oo sanadihii la soo dhaafay waxay noqotay tixraac gudaha qaybta dukaanka onlaynka ah ee Aasiya. Gearbest wuxuu na siiyaa dalabyo waqti xaddidan oo qiimo aad u fiican leh, dalabyo bilowga terminal cusub ah, waxaanna heli karnaa ficil ahaan wax kasta oo elektiroonig ah oo maskaxda ku soo dhaca.
iGogo Waa mid kale oo ka mid ah kuwa waa weyn oo inyar yar wax ka dhimaya farqiga u dhexeeya shabakadaha internetka ee moobiilka ee hadda laga heli karo suuqa. iGogo waxay na siineysaa soo jiidashadeeda ugu weyn, marka lagu daro qiimaheeda waaweyn waxaa lagu muujiyay euro iyadoo laga fogaanayo inay tahay inaan sameyno sarrifka lacagaha weligood la qabsan doonin xaqiiqda, taas oo badeecadaha badankood waxay leeyihiin rar bilaash ah, markaa uma baahnin inaan ku darno wax dheeri ah qiimaha ugu dambeeya ee badeecaddu muujineyso.
Waan joojin kari weynay sheegista shirkadda iibka internetka Qeybintaan, inkasta oo halkii laga heli lahaa dalabyo sumadaha Aasiya ah, waxaan ka heli doonnaa dalabyo xiiso leh noocyada ugu iibinta badan, qaarkoodna ma ahan kuwo caan ah. Amazon waxay sameysaa dalabyo gaar ah oo ay heli karaan dadka isticmaala maalin kasta, qaar iyaga ka mid ah waqti xaddidan ama tiro kooban, marka haddii aad raadineyso taleefan gacmeed oo aadan sugi karin muddo bil ah si aad u sii deyso, Amazon waa mid fursadaha ugu fiican ee la heli karo ee hadda lagu iibsado taleefannada gacanta iyadoo loo marayo internetka oo halkan waxaad ka arki kartaa dalabyadooda
Mana la waayi karay Arbacada ah kala soociddan. Faa'iidada ugu weyn ee eBay sida caadiga ah na siiso marka la barbar dhigo websaydhka Shiinaha ee aan kor ku soo sheegay, waa taas waqtiga dhalmada ayaa kala bar laga jaray, ahaanshaha kiisaska badankood 15 maalmood haddii aan wax ka iibsanno Shiinaha. Laakiin haddii aan raadineyno mobiillo inta badan lagu iibiyo Spain iyo Yurub, eBay sidoo kale waa goob ku habboon in laga helo dalab noocan ah, sida Amazon oo kale.
Qaybaha PCc Sanadihii la soo dhaafay waxay noqotay mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu iibsado sumcadaha moobiilka ee Shiinaha qiimo wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, inaad tahay shirkad Isbaanish ah, haddii aan dhibaato ku qabno terminaalka, iyagu waa kuwa masuulka ka noqon doona maareeyaan dayactirka ama beddelka haddii kiisku yimaado.
Waxaa ka mid ah sumadaha ay PcComponentes la shaqeyso adduunka taleefanka aan ka helno Apple, Samsung, Xiaomi, BQ, Maamuus, ZTE, Elephone, Meizu… Sidoo kale, mahadi haka gaadho mashiinka raadinta taleefannada casriga ah, waxaan ka heli karnaa taleefan casri ah oo ay ku jiraan baytariga, kaameradda, midabka, keydinta iyo astaamo kasta oo kale oo aan raadineyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Dukaamada moobiilka ugu fiican
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa bilawga wax soo saarka GDDR6 RAM ee ugu horreeya suuqa
Final Fantasy XV ee kombuyuutarka horeyba wuxuu u lahaa taariikh sii deyn iyo qeexitaan